I-Graphite Mechanical Parts Abakhiqizi & Abahlinzeki | China Graphite Mechanical Izingxenye Factory
Umkhono we-graphite shaft
Izinto ze-graphite uqobo zinokusebenza kokuthambisa, okunqunywa isakhiwo se-crystal se-graphite. Ukuthambisa kwe-graphite kungenxa yokuthambisa okuhle kwamanzi nomoya, ngaphandle kwesakhiwo se-lattice esingokwemvelo.
I-graphite blade yepompo yokuphumula
I-graphite blade, eyaziwa nangokuthi i-slide, i-blade, i-scraper, i-carbon plate, ishidi elicwengekile lekhabhoni, lingabizwa ngokubizwa ngokuthi yi-blade. Wenziwe graphite carbon impahla, okuhlala isikhathi eside, efanelekayo umkhakha wokunyathelisa, PCB, ibhamuza, photoelectric kanye nezinye izimboni.
Igiya le-graphite line-self lubrication eyingqayizivele, ukuncipha kokugqoka, ukuqhutshwa kokushisa nokumelana nokugqwala. Inezinzuzo eziqinile ekusetshenzisweni, ikakhulukazi ekushiseni okuphezulu noma kwe-ultra-low kanye naphakathi okuqinile okulimazayo. Amandla womshini we-graphite material aphansi kunalawo wensimbi ekamelweni lokushisa, kepha amandla e-graphite material ayanda ngokwanda kwezinga lokushisa kwensizakalo. Impahla ye-graphite inemishini emihle, engacutshungulwa ibe yimikhiqizo ngokunemba okuphezulu nokushelela okuphezulu, futhi ingacutshungulwa ibe yimikhiqizo enesimo esiyinkimbinkimbi.